Chọpụta ahịa kacha mma na Christmas na Europe | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Oge ntụrụndụ
Ọ bụ ezie na anyị maara na ekeresimesi na-esote dị anya, nke bụ eziokwu bụ na ọ na-amasị anyị iche maka njem ndị anyị nwere ike ịme, ọbụlagodi na ọ fọdụrụ ọnwa ole na ole. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji kwuo maka ya kacha mma Christmas ahịa na pụrụ ịchọta na Europe, ebe ọ bụ na kọntinent a ka a na-eme ememe kachasị mma na ọdịnala sitere n'akụkụ ụwa niile.
na Ahịa Krismas na-arịwanye elu na ha ị pụrụ ịchọta nile di iche iche nke ihe, ma karịsịa mma na nkọwa metụtara Christmas na-ahụkarị Christmas ihe na mba ọ bụla. Ya mere, ọ bụrụ na anyị nwere ohere, anyị agaghị akwụsị ịga otu n'ime ahịa Krismas ndị a.
1 Colmar, France
2 Bolzano, .tali
3 Gengenbach, Jamanị
Mpaghara Alsace nwere obodo nta ndị yiri ka ọ bụ akụkọ, na-eme ka ọ bụrụ ọmarịcha nleta n'oge ọ bụla. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọpụrụiche pụrụ iche ekeresimesi, ị gaghị ahapụ ya Ahia ekeresimesi Colmar. Ndi mmadu ejirila oku Krismas ebe nile. Ije ije n'okporo ámá ya na-aghọ ihe anwansi kpamkpam. E nwere ọtụtụ ahịa na-agbasa n'ọtụtụ isi. Church Market Market dị na ebe des Dominicains, ahịa maka ụmụntakịrị nọ na Petite Venice. Na Plaça Jeanne d'Arc, e nwere ahịa na ngwaahịa ndị na-ahụkarị, na Ko palacefhus nke ochie, enwere ahịa oge ochie.
Nke a ochie na-achọ obodo na-agba Chirstkindlmarkt site na ngwụcha Nọvemba rue Jenụwarị 6. Ahịa a dị na Piazza Walther ma nwee obere ụlọ nwere ụdị ngwaahịa ekeresimesi. N'oge ememme a na ngwụsị izu, a na-eme ebe ahụ ihe niile, ebe a na-eme ihe ngosi maka onye ọ bụla dịka ndị na-akọ akụkọ, ndị na-agagharị agagharị na egwu Krismas. N'ime ahịa a, e nwere ọtụtụ ihe ịchọ mma maka ekeresimesi, kamakwa echiche ndị na-atọ ụtọ maka onyinye, ọrụ nka na ngwaahịa ndị ọzọ nke gastronomy ya.
Obodo German mara mma dị na ọdịda anyanwụ nke Black Forest. N'oge ekeresimesi ọ na-abụkarị snow, yabụ ihe ngosi ahụ nwere ike ịmasị karịa. Na Ahịa Krismas dị na nnukwu ọnụ ụlọ obodo. Ahịa a nwere ọdịiche dị na ya nwere kalenda ọbịbịa kachasị n'ụwa, nke egosiri na facade nke nnukwu ọnụ ụlọ obodo. Windo na-abụ ụbọchị nke kalenda, ebe a na-anọchi anya ihe nkiri. Ọ bụ ezigbo ụlọ ahịa, nwere ihe karịrị ụlọ iri anọ
A na-akpọ ahịa dị n’obodo a Advent Advent. N'ime obodo a, mmụọ ekeresimesi na-ebi ndụ ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ na-amalite na Disemba XNUMX, ọ bụghị dị ka obodo ndị ọzọ na-eme ya kwa izu na Nọvemba. Ebe a nwere ọtụtụ ebe ị nwere ike ịga, na mgbakwunye na ịnwe ọmarịcha ọnọdụ ịzụ ahịa ekeresimesi. Na Hauptplatz, nke bụ isi obodo, nwere ụlọ ahịa kachasị ukwuu. Na Glockenspielplatz enwere ahịa a raara nye ngwaahịa ndị a na-ahụkarị na mpaghara. Ahịa kacha ochie n’obodo a dị na mpaghara Franciskaner. Na mgbakwunye na ahịa, n'ogige nke Landhaus, e nwere ihe ngosi ngosi ọmụmụ dị egwu ejiri akpụrụ mmiri mee. N'ime ụlọ ezumezu nke obodo, ha na-ebu nnukwu kalenda ọbịbịa nke mere ka obodo ahụ niile nwee ike ịgụta ọnụ na ekeresimesi.
A na-ahụta ahịa Krismas dị na obodo a kachasị mma na Switzerland niile, ma nha na ogo. Ọ na-ewere ọnọdụ n'ime Barffüsserplatz na Münsterplatz square. Obodo a nwere obodo ochie mara mma nke edoziri n’oge ekeresimesi iji nabata ndị ọbịa. Ọmarịcha ụlọ ahịa dị n'ámá na-apụta, nke ndị ụlọ ugwu ugwu Switzerland na-akpali site na ya iji nye ihe niile amara. N’ụlọ nkwakọba ihe ọ bụla, e nwere ndị omenkà na-egosipụta ngwaahịa ha ka anyị wee nwee ike ịchọta ezigbo onyinye pụrụ iche. Na Claraplatz enwere ike ịchọta ngwaahịa gastronomic, maka ndị hụrụ nri n'anya.
Na Brussels ha na-enweta Christmas na ụdị, ya mere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa obodo kwa afọ iji nwee ọ theseụ ụbọchị ndị a n'ụzọ pụrụ iche. A na-akpọ emume a na-eme n’oge a Plaisirs d’Hiver, iji nye aha ha ọtụtụ mmemme na ihe ngosi ndị n’eme. Na Christmas ahịa e mere baptizim WinterWonders, na ihe yiri ka anyị na-akwaga ụwa efu. Ọ bụ ahịa na-agafe n'akụkụ dị iche iche nke obodo ahụ, yana ụlọ ntu ebe ị nwere ike ịzụta ihe. Ha nọ na Nnukwu Ebe, tinyere nnukwu osisi Krismas, na Ebe de la Monnaie, na Piazza Santa Catalina n'akụkụ nnukwu ụkwụ ụkwụ Ferris ma ọ bụ na mpaghara etiti Bourse. Na ntụrụndụ maka obere ụmụaka, ezinụlọ nwekwara ike ịchọta ntụrụndụ maka ụmụaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oge ntụrụndụ » Ahịa ekeresimesi kacha mma